Rasmi: Isu-duwe Cusub oo loo Magacaabay Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha ee Gobolka Sool
HomeWararka MaantaRasmi: Isu-duwe Cusub oo loo Magacaabay Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha ee Gobolka Sool
07/01/2017 Samatar Mohamed
Wasiirka Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Jamhuuriyadda Somaliland Md. Cabdirisaaq Waaberi Rooble ayaa masuul cusub u magacaabay xilkii Isu-duwaha Dhallinyarada iyo Ciyaaraha ee Gobolka Sool.
Sida ku cad wareegto Wasiirka Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Jamhuuriyadda Somaliland Md. Cabdirisaaq Waaberi Rooble soo saaray kuna taariikhaysan Maanta oo ay bisha January tahay 7, ayaa wasiirku waxa uu u magacaabay Mr. Fu’aad Axmed Cali inuu ahaado Isuduwah Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Gobolka Sool, waxaanu xilkii Isu-duwenimo ka qaaday Isu-duwihii hore Mr. Jaamac Khaliif Cilmi.
Wasiir Cabdirisaaq Waaberi Rooble waxa uu ku sheegay wareegtada in uu markii uu arkay kuna qancay aqoonta iyo kartida shaqo ee Mr. Fu’aad Axmed Cali uu gartay inuu u magacaabo xilka Isu-duwaha Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Gobolka Sool. Waxa sidoo kale Wasiirku uga mahad-celiyay Isu-duwihii hore Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Mr. Jaamac Khaliif Cilmi sidii wanaagsanayd ee uu ula soo shaqeeyay Wasaarada muddadii uu xilka hayay.
Wareegtada uu ku saxeexan yahay Wasiir Cabdrisaaq Waaberi ee uu ku magacaabay Isu-duwaha cusub ee gobolka Sool ayaa u dhignayd sidan:
“Kadib markaan arkay in baahi loo qabo dardar-gelinta hawlaha shaqo ee Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Gobolka Sool. Kadib markaan arkay in isbedal looga baahan yahay Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Gobolka Sool. Markaan in baddan ka baaran degay, kana cida ku haboon, markaan arkay kartidiisa, aqoontiisa iyo firfircoonidiisa hawlkarnimo.
Waxaan xilkii Isu-duwaha Gobolka Sool ee Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Jamhuuriyadda Somaliland u magacaabay Mr. Fu’aad Axmed Cali. Waxaan la idin farayaa sida ugu dhakhsaha baddan inaad xilka ula kala wareegtaan”.
Isu-duwaha cusub Mr. Fu’aad Axmed Cali ayaa ka soo shaqeeyay dalka dibadiisa gaar ahaan wadanka Ingiriiska, waxana uu qeyb ka ahaa Akadamiyada naadiga Manchester City ee wadanka UK, halkaas oo uu muddadii uu joogay ku guuleystay inuu ka soo saaro ciyaartoy tiro baddan oo caan ka ah horyaalka dalka Ingiriiska iyo qaarada Yurub.
Mr. Fu’aad Axmed Cali ayaa aqoontiisa heerka jaamacadeed ee dhanka ciyaaraha ku soo qaatay wadanka UK gaar ahaan magaaladda Manchester. Dhanka kale Isu-duwaha cusub ee wasaaradda ciyaaraha ee Gobolka Sool ayaa xilka loo magacaabay waxaa si weyn u soo dhaweeyay bulshadda Gobolka Sool, gaar ahaan dhallinyarada aqoonyahanka iyo bahda ciyaaraha ah.
Ugu dambeyntii, Isu-duwaha cusub ee Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha ee Gobolka Sool ayaa ka dareen-celiyay xilka loo magacaabay, waxaana uu ugu horeyn uga mahad-celiyay Wasiirka iyo Agaasimaha guud ee Wasaaradda Ciyaaraha iyo sidoo kale masuuliyiinta iyo wax-garadka gobolka Sool, waxaana uu ballan-qaaday inuu horumar muuqda ka sameyn doono horumarka dhallinyarada iyo ciyaaraha ee Gobolka Sool.